Bogga ugu weyn 7 Siyaabood Oo Sharci Ah Sida Loo Helo Bitcoins Bilaash 2022 | Gebi ahaanba Bilaash
Helitaanka bitcoins iyada oo loo marayo habab xalaal ah oo lacag la’aan ah maanta iyo waqtigan ayaa ah mid ka mid ah waxyaabaha ugu adag abid. Ku kasbashada, waxoogaa ka yar. Helitaanka bitcoins -ka waxaa lagu heli karaa saddex siyood; u shaqaynaya, iibsanaya, macdan qodaysa.
Taasi waxay tidhi, shaqayntu way fududahay, in yar baa la iibsanayaa, waxaana laga yaabaa inay u fududdahay qofka caadiga ah inuu galo irdaha luulka jannada ee meeshan marka loo eego adiga bitcoins -ka.
Satoshi Nakamoto malaha wuu jeclaan doonaa inuu akhriyo sida loo kasbado bitcoins lacag la'aan. Isla bitcoins -kii isaga ka dhigay 56th qofka ugu taajirsan adduunka mar uun 2017.
Haddii rajadaadu tahay uun inaad kasbato xoogaa bitcoins ah ama qayb ka mid ah, markaa maqaalkani waa adiga. Haddii ujeeddadaadu tahay inaad taajir noqoto adigoo kasbanaya bitcoins lacag la'aan ah iyada oo loo marayo hab sharci ah, waa hagaag, waa inaad weli akhridaa maqaalkan.
Ka dib oo dhan, qof kastaa wuxuu u baahan yahay shaqo, jihada adduunkuna u socdo waxay muujineysaa in mar uun, bitcoins iyo cryptocurrencies kale ay noqon karaan dariiqa kaliya ee la aqbalo ee isgaarsiinta, is -weydaarsiga maaliyadeed, iyo wareejinta maalka la aqbali karo.
Raadinta bitcoins -ka bilaashka ah waxay la mid tahay raadinta dahab bilaash ah muddo dheer ka dib dahabkii California ee 1850 -meeyadii iyo tobannaan sano ka dib. Rajada dad badani waxay ahayd in la baadho oo laga yaabo in xoogaa nasiib ah la helo, la ogaado dahabka oo aan helin kuwii bakhtiyay oo wasakhda u qoday.
Isla nasiib wanaag, qaar baa heli kara, laakiin way sahlan tahay in la helo haddii aad lahayd qof ku haga. U oggolow maqaalkani hagahaaga si aad u kasbato xoogaa bitcoins lacag la'aan ah. Diyaar ma u tahay?
Xusuusnow intii lagu gudajiray dahabka, dadka intiisa badan ma aysan sameynin tan oo lacag ah oo ay u maleeyeen inay sameyn doonaan. Inta badan, waxay ahayd meheraddii ugu qaalisanayd ee ay abid bilaabaan. Suuqa waxaa ka buuxa degenaansho iyo dabeecad qallafsan.
Xilliyada kor u kaca sida xilligii dahabka, ilo -wareedyada qaarkood ayaa laga soo xigtay iyagoo leh “Markay sare u kacday 1849 -kii, saadaaliyayaashu waxay filan karaan in qiimayaashu hubaal keeni karaan shoog dhejis ah: Hal ukun ayaa ku kici kara $ 25 lacagtii maanta, qaxwaha in ka badan $ 100 halkii pound iyo bedelida kabo duugoobay ayaa dib kuugu celin kara in ka badan $ 2,500. ”
Suuqa bitcoin ma aha mid loogu tala galay dadka daallan. Suuqa ayaa kaa nixin kara inaad samayso waxyaabo aadan filayn.
Sideen u bixiyaa si aan u barto sida loo kasbado?
Waxaad bixinaysaa dareenkaaga. Waxaad marin u heli doontaa, Waxaad helaysaa isbarasho iyo talo. Markaa waad shaqaysaa. Markaad akhrinayso maqaalkan oo aad isku daydo inaad ogaato sida loo kasbado bitcoins, ha ku mashquulin waxyaabaha khaldan. Xooga saar!
Dadka akhriya nuxurkaan, waxay ku dambeeyaan akhriska Sida Lacag Loogu Sameeyo Hoos U Dhac | 15 Siyaabo Hubaal ah 2022
BBC -da mid ka mid ah maqaalladeeda waxay ku tilmaamtay bitcoins -ka “sida cryptocurrency, lacag la taaban karo ama lacag dijitaal ah - waa nooc lacag ah oo gebi ahaanba dalwaddii ah.”
XIDHIIDHKA: Faallooyinka Caymiska Liinta 2022: Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka | Legit & Fadeexad | Sida ay u shaqayso
Investopedia maqaalkeeda ku saabsan bitcoins ayaa ku sifeeyay bitcoins -ka “a lacagta digital oo la abuuray Janaayo 2009 ka dib shilkii suuqa guryaha. Waxay raacdaa fikradaha lagu qeexay a warqad cad by Satoshi Nakamoto oo qarsoodi ah oo aan magaciisa la shaacin.
Aqoonsiga qofka ama dadka abuuray farsamada ayaa wali ah wax qarsoon. Bitcoin waxay bixisaa ballanqaadka khidmadaha macaamil-ka-hooseeya marka loo eego hababka lacag-bixinta ee tooska ah ee online-ka ah waxaana ku shaqeeya maamul baahsan, oo ka duwan lacagaha ay dowladdu soo saarto.
Ma jiraan bitcoins jireed, kaliya dheelitirka ayaa lagu hayaa buug -gacmeed dadweyne oo qof walba uu si hufan u heli karo, taas - oo ay weheliso dhammaan macaamilkii Bitcoin - waxaa lagu xaqiijiyay tiro aad u badan oo ah awoodda xisaabinta.
Bitcoins ma soo saaraan ama ma taageeraan bangiyada ama dawladaha, mana aha bitcoins shaqsi ahaan qiimo ahaan badeecad ahaan.
Inkastoo aysan ahayn qandaraas sharci ah, Jaantusyada Bitcoin oo caan ku ah, waxayna kicisay bilaabista boqolaal lacago kale oo dalwaddii ah oo si wadajir ah loogu yeero altcoins. "
Intaas waxaa sii dheer…
Coindesk maqaalkeeda ayaa ku tilmaamay hawlgalka Seeraar “Bitcoins lama daabaco, sida doolar ama yuuro - waxaa soo saaray kombiyuutaro adduunka oo dhan iyadoo la adeegsanayo software lacag la’aan ah waxaana lagu hayaa si elektaroonig ah barnaamijyada loo yaqaan boorsooyinka.
Qaybta ugu yar ee bitcoin waxaa loo yaqaan satoshi. Waa boqol milyan oo bitcoin ah (0.00000001). Tani waxay awood u siineysaa microtransaction in lacagta elektiroonigga ah ee dhaqameed aysan qaban karin.
Bitcoin (badiyaa loo soo gaabiyo BTC waxay ahayd tusaalaha ugu horreeya ee waxa aan ugu yeerno cryptocurrencies maanta, fasalka hantida sii kordheysa ee la wadaaga astaamaha qaar lacagaha dhaqameed marka laga reebo inay yihiin kuwa dhijitaalka ah, iyo xaqiijinta abuurista iyo lahaanshaha waxay ku saleysan tahay cryptography.
Guud ahaan, ereyga “bitcoin” wuxuu leeyahay laba fasiraad oo suurtogal ah. Waxaa jira calaamadda bitcoin, taas oo loola jeedo furayaasha cutub ka mid ah lacagta dhijitaalka ah ee adeegsadayaashu leeyihiin oo ka ganacsadaan. Calaamadda bitcoin ayaa lagu hayaa boorsada bitcoin oo lagu garto xarig tirooyin iyo xarfo sida “1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa.”
Marka qof doonayo inuu kuu soo diro bitcoin, qofkaasi wuxuu u diri doonaa cinwaankaaga jeebka dadweynaha, waxaadna ka heli doontaa furayaashaada gaarka ah. ”
In kasta oo nimankii ugu horreeyay ay u adeegsadeen leben wareegsan oo weyn sidii lacag ahaan, waxaad heli kartaa inaad u isticmaasho dhalooyinka waaweyn ee wareega ah lacag ahaan.
7 siyaabood oo sharci ah oo ku saabsan sida loo helo bitcoins lacag la’aan
#1 - Freelancing
Freelancing-ku waa xirfad ku salaysan qandaraas halkii uu qofku ka qori lahaa urur, wuxuu adeegsadaa xirfadihiisa iyo waayo-aragnimadiisa si uu adeegyo u siiyo tiro macmiil ah.
Erayada fudud, freelancing waa marka aad isticmaasho xirfadahaaga, waxbarashadaada, iyo waayo -aragnimadaada si aad ula shaqayso macaamiil badan oo aad u qabato shaqooyin kala duwan adigoon u goynin hal shaqo -bixiye.
XIDHIIDHKA: Dib u eegista Rev.com 2022: Sida ay u Shaqayso | Fadeexad ama Adeegga Qoraalka Sharciga ah
Freelancing badanaa waxay ku lug leedahay shaqooyin ama riwaayado kuu oggolaanaya inaad ka shaqayso xaaladaha guriga-guriga. Waxa kaliya oo ah in shaqooyin badan oo shaqaaluhu qabtaan lagu samayn karo intarneedka iyaga oo aan joogin shirkadda ama meesha macmiilka.
Markaad xor ka tahay, si kasta oo ay tahay nooca shaqadaadu, waxaa lagu weydiin doonaa inaad doorato sida lagu siinayo iyo lacagta aad doorbidayso.
Codsashada lacag bixinta shaqada la qabtay in lagu sameeyo bitcoins -ka ayaa ah habka ugu fudud uguna walaaca yar si loo bilaabo kasbashada bitcoins.
#2 - Qorista
Blog-ga waxa loola jeedaa qorista, sawir qaadista, iyo warbaahin kale oo si toos ah internetka loogu daabaco. Astaamaha lagu garto balooggu waa soo noqnoqoshada cusboonaysiinta, aan rasmi ahayn, iyo fursadda akhristayaasha inay si dhab ah u ogaadaan una fahmaan waxaad adigu qoraa tahay.
Waxyaabaha blogku ka kooban yahay way kala duwan yihiin maadaama ay jiraan hodanno badan oo la abuuro sannad walba. Waxaa jira baloogyo socdaal, baloogyo siyaasadeed, baloogyo ganacsi, iwm. Waxa muhiimka ah in la xuso ayaa ah inaad lacag ka samayn kartid.
Halkii aad ku tegi lahayd dhaqameed leh shabakad xayeysiis caadi ah sida Google Adsense, waxaad la tegi kartaa shabakad cryptocurrency oo kaa caawinaysa inaad jeebkaaga geliso xoogaa bitcoins ah.
Shabakadda xayeysiiska ee Bitmedia tusaale ahaan waxay bixisaa qayb koodh ah oo lagu dhejin karo balooggaaga WordPress. Marka uu qof gujiyo mid ka mid ah xayeysiisyadaas, waxaad heleysaa xoogaa bitcoins ah.
#3 - Bilaabidda naadi heer sare ah
Haddii aad isku aragto inaad tahay dareen internet ama aad hore u ahayd mid, waad lacag ku bixin kartaa. Waqti ka mid ah sannadka 2019, qof ayaa arkay koob kafeega ah xilligii ugu dambeeyay ee Game of Thrones, baraha bulshada ayaana qarxay.
Markii warku si aad ah u faafay, dadku waxay bilaabeen inay ku qoslaan kaftanka waxaana jiray malaayiin kaftan noocaas ah oo dhan Twitter iyo internetka. Qof adeegsade ah ayaa qoray “Bal qiyaas HBO oo malaayiin ku bixisa dhacdo kasta oo lagu dhammeeyo hal koob oo kafee ah. Guess Dany ma helin xusuusta ku saabsan silsiladaha dib loo isticmaali karo. ”
Haddii aad leedahay karti aad ku ogaato waxyaabaha ay dadka kale ku seegaan fiidyowyada fayraska ama wax kasta oo kale, waxaad ku dallaci kartaa khidmadaha xubinnimada ee bitcoins kooxdaada caanka ah.
In kasta oo ay tani u ekaan karto mid aan macquul ahayn, waxaan rabaa inaan kuu sheego in dadku lacag yar ku qaataan shaqada intaad ku heli karto bitcoins lacag la'aan. Soosaarayaasha filimku wax dhib ah kuma qabaan inay lacag ku siiyaan si aad u ogaato waxyaabaha ku kici kara malaayiin si ay u dayactiraan.
#4 - Iska ilaali bitcoins -ka aad hore u haysatay
Tani waxay u ekaan kartaa halkudheg laakiin ma ogtahay tirada dadka iibiya bitcoins -ka ay hore u haysteen sababta oo ah waxay dareemayaan in suuqa hoos u dhacay? Haa, mar kale hubi.
XIDHIIDHKA: Sida Loo Ogaado Haddii Aad Adeegsan Kartid Hadiyadaha GameStop onlayn
Markay maalmuhu sii socdaan, adeegsiga bitcoin ayaa sii wada fidinta sidaasna qiimuhu waa sii socdaa. Habka ugu fudud ee xalaal ah ee lagu helo bitcoins lacag la’aan waa inaad ku haysaa dhammaan bitcoins -ka aad hadda haysato maadaama badbaadadaadu ku xirnayd.
Dad badan, xeerku waa “ha iibin.” Adiguna sidaas oo kale ayaad samayn kartaa.
#5 - Noqo dillaaliye websaydh
Tani uma sahlana sida ay u dhawaaqdo. Investopedia waxay ku tilmaamaysaa maalgashade ahaan shaqsi ama shirkad u shaqaysa sidii dhexdhexaadiye u dhexeeya maalgashadeha iyo sarrifka dammaanadda.
Dillaaliyeyaasha mareegaha waxay u adeegaan sidii dhexdhexaadiye u dhexeeya milkiilayaasha bogagga iyo kuwa doonaya inay iibsadaan. Iyagu waa dhex -dhexaadiyaasha, dhex -dhexaadiyayaashii hore ee wanaagsanaa ee ku siiya degel kasta oo aad rabto inaad ku bixiso, oo ma ku sameeyaan bilaash? Nah.
Dilaaliin, dillaaliyeyaasha webka waxay bixiyaan adeegyo siyaabo kala duwan loo magdhabo, ha ahaato guddiyo, khidmado, ama iyada oo lagu bixiyo sarrifka laftiisa.
Waxaas oo dhan, ujeeddadaadu waa kaliya inaad codsato in khidmadahaaga isku xirka lagu bixiyo bitcoins. Waa mid ka mid ah siyaabaha lagu helo bitcoins lacag la’aan.
#6 - Iibi sawirradaada iyo fiidyowyadaada
Haddii aad tahay qof socdaala oo sawirro iyo fiidyowyo badan ka qaata meelo la yaab leh, markaa lacag ayaa lagu siin karaa markaad samayso wax aad ku raaxaysato.
Shabakadaha qaarkood waxay kuu oggolaanayaan inaad sawirradaada iyo fiidyowyadaada iibiso ka dibna ku dhejiso summadaha qiimaha. Waa inaad ku adkaysataa in lagu siiyo bitcoins.
#7 - Ku biir freebitcoin
Suugaan ahaan, freebitcoin wuxuu ku siinayaa bitcoins lacag la'aan ah. Websaydhku wuxuu leeyahay “saacad kasta, waxaan ku bixinnaa ilaa $ 200 oo ah bitcoins bilaash ah iyada oo loo marayo qasabadda bitcoin. Majiro, ajande qarsoon majiro - kaliya waa hab lagugu bilaabi karo dhacdooyinka cajiibka ah ee adduunka oo dhan oo loo yaqaan bitcoin iyo cryptocurrency. ”#
Marka websaydhku wuxuu jeclaan lahaa inuu ku siiyo $ 200 bitcoins kaliya inaad rabto inaad ku biirto.
Waxaa jira siyaabo badan oo lagu helo bitcoins lacag la’aan, waxa kaliya ayaa ah inaad u baahan tahay inaad tijaabiso waxyaabaha oo aad ogaato waxa adiga kuu shaqeeya iyo waxa aan shaqeynin.
Inta badan waxyaabaha aad hiwaayad u samayso waxay awood u leeyihiin inay ku kasbadaan bitcoins -ka aad u baahan tahay. Waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad u soo bandhigto waxyaabahaas hadda adeeg ahaan.
Dib -u -eegista Naadiga Guriga ee 2022: Ma Xalaalbaa mise Waa Lacag La Sameeyo Fadeexad Online ah?
Yaa Dhaqaajiyay Soo -koobidda Buuggayga Cheese | 2022
Buugga, "Yaa Dhaqaqay Jiiskayga?" waxaa qoray Dr. Spencer Johnson, cilmi-nafsiga, mufakir, iyo qoraaga ugu iibsiga badan,…
Lacagta iyo caannimada hadda waxay la mid yihiin isboortiga sidaa darteed waxay u gogol xaareysaa qaab cusub oo malaayiin badan oo…
11 Siyaabood ee Ugu Fiican ee Lacag Loogu Siin Karo In Si Xor Ah Loo Socdo 2022 | Hada Bilow
Waxaad socotaa maalin kasta. Iyadoo ay caafimaad tahay iyo hab jimicsi, waxaad sidoo kale samayn kartaa qaar...